» कान्छि श्रीमती भेट्न भन्दै निस्केका हेमराजको शव १७ दिनपछि जंगलमा यस्तो, अवस्थामा भेटियो, छोराको शव देखेर आमा वेहोस् ! हेर्नुहोस भिडियो कान्छि श्रीमती भेट्न भन्दै निस्केका हेमराजको शव १७ दिनपछि जंगलमा यस्तो, अवस्थामा भेटियो, छोराको शव देखेर आमा वेहोस् ! हेर्नुहोस भिडियो – हाम्रो खबर
कान्छि श्रीमती भेट्न भन्दै निस्केका हेमराजको शव १७ दिनपछि जंगलमा यस्तो, अवस्थामा भेटियो, छोराको शव देखेर आमा वेहोस् ! हेर्नुहोस भिडियो
काठमाडौ । चल्लाको औषधी लिन जान्छु भन्दै गत माघ १४ गते घरवाट हिडेका बाँकेका हेमराज खत्री घर फर्किएनन् । भोलीपल्ट देखि उनको खोजी थालिएको थियो । हराएको १७ दिन पछि उनको शव जंगलमा फेला परेको छ । श व स डे को अवस्थामा फेला परेको हो ।”
यो पनि”५ बर्षका, गायक प्रहार र ७ बर्षिय,गायिका उत्सुकता,ले गाए यस्तो, रमाइलो,गीत, हेर्नुहोस हसाएरै मुर्छा पारे-
“काठमाडौ । केही समय देखि मिडिया र सामाजिक सन्जालमा भाईरल भईरहेका प्रतिभाहरु अहिलेको समयमा सबै बाल कलाकारनै छन । गुल्मीका सचिन परियार, रबिना बसेल र धादिङकी कमला घिमिरे यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन ”
“त्यस्तै गरि झापाका अशोक दर्जी पनि छटाउनै नहुने नाम हो । हो आज हामी अहिलेसम्मकै उमेरमा कम मानिएका भाईरल भाई पाल्पाका प्रहार बस्नेतको बारेमा कुरा गर्दैछौ जो ५ बर्षमै यति धेरै चलाख र चम्बु छन कि जो कोहीले उनीस“ग कुरा गर्न पनि सक्दैन”।
“यसैगरि उनीस“ग गित गाउनमा साथ दिएकी छिन उही पाल्पाकै ७ बर्षिय उत्सुकता ढकालले । भाईले गित गाउदा गाउदै यति धेरै हसाए की रेकर्डिष्ट पनि एकैछिन आराम गरेर फेरी रेकर्डिङ गरेका थिए ।”
“दोहोरीमै यति धेरै राम्रो आवाज र अभिनय गर्न सक्ने प्रहार बल्ल ५ बर्षमा टेकेका छन र नेपालकै कान्छा गायक हुन भन्दा कुनै शंका पनि छैन । उनका मनपर्ने गायक पनि पाल्पाकै पुश्कल शर्मा हुन जो चर्चित लोक गायक हुन । हेरौ उनै प्रहारको कमेडी र गित ”